Wararka - Sidee Loogu hagaajiyaa Nadiifinta Mashiinka Mootada?
Marka mootada la raaco muddo dheer, mishiinku guud ahaan wuxuu yeelanayaa nadiifinta waalka oo aad u weyn ama aad u yar, aad u weyn ama aad u yar, aad u weyn ama aad u yar.
Dad badan oo waxbadan ka og futada ayaa laga yaabaa inaanay ka warqabin waxa ay dhibaatooyinkani sababi karaan, macluumaadka ay la tashadaanna inta badan waa mid cakiran. The mooto bajaajle qeybiyaha waalka wuxuu ku siin doonaa falanqeyn la fududeeyay, laga bilaabo fahmidda filtarka illaa gunaanadka.
Noocyo dhowr ah oo waalli ah oo farsamooyinka qaybinta hawada ah
Afar-istaag waalka matoorrada mootada foomka waalka farsamada qaybinta, marka loo eego booska waalka, waxaa jira wiishyo dhinac ah (SV), filtarka dusha sare (OHV), iyo korantada camshaft (OHC) oo saddex nooc ah.
1. Waalka dhinac ku rakiban
Qaab dhismeed ahaan, waalka dhiniciisu waa kan ugu fudud, laakiin qaadashada foomkan waalka awgeed, waxqabadka mashiinka ka hortagga qarxa iyo waxqabadka xawaaraha sare waa liitaa, waxaa kaliya loo isticmaali karaa saamiga cadaadiska hooseeya iyo matoorrada xawaaraha yar, shisheeyaha ku xanniban dalalku way joojiyeen isticmaalkooda.
2. Dusha sare nooca waalka nooca camshaft
Marka la eego waxqabadka, waalka nooca camshaft ee dusha sare ayaa ah midka ugu fiican, maadaama uu buuxin karo shuruudaha xawaaraha sare, saamiga riixitaanka sare, iyo gawaarida awooda sare leh, isla mar ahaantaana leh dhaqaale wanaagsan, sidaa darteed si ballaaran ayaa loo adeegsadaa.
3. Waalka kore
Qaab dhismeedkeedu waa ka sii adag yahay. Waqtigan xaadirka ah, badankood waxay sii wadaan in laga adeegsado Mareykanka, Talyaaniga, iyo dalal kale oo hore u ahaan jiray Jarmalka Galbeed (mootooyin R-taxane ah oo ay soo saarto BMW) sababo la xiriira caadooyinka wax soo saarka.
Isku hagaajinta Qalabka Kala-baxa
Marka gaariga la isticmaalayo, qalabka wax lagu kala gooyo ayaa isbedelaya sababo la xiriira xirashada qaybaha farsamada qaybinta hawada ama furfurida daboolka hagaajinta, sidaas darteed waa in la hubiyaa oo la hagaajiyaa xilliyo.
1. Habka camshaft dusha sare ee habka isku hagaajinta waalka
(1) Ka qaad daboolka qolka qaadashada iyo qiiqa iyo daboolka magneto;
(2) Wareeji rotor-ka magnetomotor si calaamadda "T" ee dusha sare ee rotorku ula jaanqaado calaamadda santuuqa, bistooladduna waa inay ku sugnaataa joogsiga sare ee istaroogga cadaadiska.
(3) Si taxaddar leh u gel taliyaha oo leh dhumucda qiimaha nadiifinta waalka ee lagu caddeeyay waalka oo gadaal iyo gadaal u soo jiid, haddii aad dareentid xoogaa iska caabin ah, nadiifintu waa ku habboon tahay.
(4) Haddii nadiifintu aysan habboonayn, ka dib rog lowska wax hagaajinaya, oo isticmaal bambaano yar si aad u rogto furitaanka hagaajinta inta aad jiidanaysid joogsadaha si aad u hubiso ka soo bixidda, iyo ka dib nadiifintu markay habboon tahay, mar kale adkee.
2. Habka hagaajinta ee nadiifinta waalka dhinac
Ka saar daboolka qolka waalka oo ka saar furka; fartaada ku xir godka dhimbiilaha isla markaana ku dhaji barta bilowga, marka fartaadu dareento saameynta qulqulka hawada, bistoolada ayaa ku jirta isugeynta cadaadiska; ka dib madaxa mashiinka wax lagu rido ayaa la gelin karaa godka dhimbiilaha, ka dibna si tartiib tartiib ah ayuu u tallaabsan karaa baydalka bilowga marka shaandheeyaha uu kor ugu kaco meesha ugu sarreysa, bistooladdu waxay joogtaa barta joogsiga;
Hubi oo hagaaji qashinka waalka. Qaabku wuxuu lamid yahay kansalka korka camshaft waalka hubinta iyo habka hagaajinta.
3. Dhibaatooyinka in la sharaxo
Fiilooyinka dhinaceeda ku rakiban, nadiifinta waalka waa kala nadiifinta inta udhaxeysa dhamaadka qaadashada iyo jirida tuubada qiiqa iyo furitaanka hagaajinta ee santuuqa; qaanadaha dusha sare iyo fallaaraha camshaft, kala nadiifinta inta udhaxeysa waalka iyo furitaanka isku hagaajinta gacanta dhagaxa.
Farqiga kulul ayaa waxyar ka yar farqiga qabow, oo farqiga lagu cabbiro xaaladda qabow ee matoorka ayaa ah farqiga qabow.
Badanaa, farqiga qaboojiyaha ee qaboojiyaha wuxuu udhaxeeyaa 0.08 ～ 0.10mm, iyo qiiqa wasakhda qaboojiyaha wuxuu kudhowaad yahay 0.10 ～ 0.12mm. Isku hagaajinta waa in si adag loo sameeyaa iyadoo la raacayo nadiifinta ku qeexan buuga tilmaamaha.
Hubinta iyo hagaajinta nadiifinta waalka waa in la sameeyaa marka qalabka wax lagu shubo iyo qiiqa ay gabi ahaanba xirmaan. Marka uu pistonku joogo barta joogsiga sare ee istaroogga cadaadiska, qaadashada iyo qiiqa qiiqa waa la wada xidhayaa, markaa marka la hagaajinayo nadiifinta waalka, furaha waalka waa inuu ku yaal barta joogsiga sare.
Isku hagaajinta qalabka wax lagu xidho waa in la sameeyaa marka mashiinku qabow yahay, waana mamnuuc in la hagaajiyo qalabka wax lagu xidho marka uu injiintu shaqeynayo. Wixii mashiinka laba-dhululubo ah, hubi oo hagaaji silsilad kasta.